संघर्ष | स्वास्थ्य खबरपत्रिका
होमपेज » "संघर्ष" डाक्टरी जीवन मखमली फूलजस्तो भनिन्छ डाक्टरहरु यान्त्रिक र व्यस्त हुन्छन् । साथै एकोहोरा पनि । तर त्यस्तो होइन । मानवीय हिसावले उनीहरु माया, ममता, स्नेह र पारिवारिक हार्दिकताबाट घेरिएका हुन्छन् । उनीहरुका पनि आफ्नै प्रकारका सुख–दुखका अनुभूति हुन्छन्, आफ्नै खालका सामाजिक र पारिवारिक जिम्मेवारी र दायित्व हुन्छन् । आफ्नो निजी जीवन र स्वभावका बारेमा यसपटक डा. सुशील कोइरालाले हामीसँग [...]
बिरामीको सेवा नै जसको मुल ध्येय हो नवराज थापा, वीर अस्पताल – स्वास्थ्य खबरपत्रिका / अपाङ्ग मानिसलाई काम दिन भनेपछि अधिकांश मानिस नाक खुम्च्याउँछन् । किन त्यसो गरेको भन्ने प्रश्न गर्दा उनीहरूको उत्तर हुने गर्छः शारीरिक रुपमा कमजोर भएपछि के काम गर्लान् र ? यस्ता चिन्तन बोक्नेहरुका लागि वीर अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा कार्यरत नवराज थापा गतिलो जवाफ हुन् । उनी अपाङ्ग भएपनि [...]
बलात्कारले एचआइभी संक्रमित युवतीको कथा - स्वास्थ्य खबरपत्रिका / गरिवी र बाध्यताले सडकमा जीवनयापन गरिरहेका बालबालिकाको स्वास्थ्य अवस्था कति जोखिमपूर्ण रहेछ भन्ने कुरा एउटा घटनाले प्रष्ट पारेको छ । पारिवारिक हेरचाह र मायाबाट बञ्चित भएपछि प्लाष्टिक टिपेर जीवनयापन गर्दै आएकी काठमाडौंकी एक १६ वर्षे बालिका एचआइभी संक्रमति बन्न पुगेको घटनाले यस्तो जोखिमपूर्ण अवस्थाको खुलासा गरेको हो । पारिवारिक अवस्था [...]
चिकित्सकले नयाँ औषधि ल्याउन प्रोत्शाहन गरे शंकर घिमिरे / मेरो भिनाजु एचएन खनालले विराटनगरमा औषधिको व्यवसाय गर्नुभएको थियो । उहाँकै सल्लाहअनुसार हामीले औषधि उद्योग स्थापना गरेका हौं । पन्ध्र वर्षअघि औषधि उद्योगका लागि अहिलेको जस्तो सहज वातावरण थिएन । भएका कम्पनीका भौतिक पूर्वाधार पनि राम्रा थिएनन् । हामीले गुणस्तरीय उद्योग खोल्ने भनेर ठूलो लगानी गरेका थियौं । भिनाजुसहित हामीले धेरै [...]
घस्रदै डाक्टर, बैसाखी टेकेर सेवा सामान्यतः अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई समाजमा छुट्टै नागरिकको रुपमा हेरिन्छ । शारीरिक रुपमा अपाङ्ग र आर्थिक रुपमा अभावमा बाँचेको मानिसले आफ्नै बलबुँतामा पढेर डाक्टर बन्नु संसारमै थोरै उदाहरण हुनसक्छ । गोरखा जौबारीमा स्थायी घर भएका डा.राजु ढकाल आत्मविश्वास र मेहनतबाट सफल परिणाम प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने यस्तै ज्वलन्त उदाहरण हुन् । दुर्गम जिल्ला गोरखाको जौबारी [...]
विरामीको खुसी नै सन्तुष्टि - स्वास्थ्य खबरपत्रिका / नयाँ बानेश्वर निवासी डा.अनुपमा सुवाल काठमाडौँ मेडिकल कलेजमा गाइनोकोलोजिस्ट छिन् । हालैमात्र कलेज अफ मेडिकल साइन्स भरतपुरबाट एमडी सिद्धाएकी उनले काठमाडौ मेडिकल कलेजबाटै एमबिबिएस गरेकी हुन् । सिद्धार्थ बनस्थलीबाट एसएलसी परीक्षा प्रथम श्रेणिमा उत्तिर्ण गरेकी डा. अनुपमाले क्याम्पीयन कलेजबाट प्लस टु उत्तिर्ण गरेकी हुन् । सानोछँदा डाक्टर बन्ने सोच नभएकी डा.अनुपमा [...]
सबल नेतृत्व, सफल अस्पताल धेरैले ठान्छन् छोराछोरीलाई राम्रो शिक्षा दिनका लागि धन चाहिन्छ । तर, अभिभावकको मन र पढाई प्रति सन्तानको मेहनत भयो भने अभावको बीचबाट पनि एउटा सामान्य नागरिक प्रतिष्ठित बन्न सक्छ । यो भनाईसँग मेल खाने उदाहरण हुन् चितवनका अष्टमान श्रेष्ठ र उनका मेहनती छोरा दीपक श्रेष्ठ । बाबु अष्टमानले छोरा पढाउनकै लागि चितवनमा सानो पउरोटी उद्योग [...]
गरे के हुँदैन ? डाक्टरहरू दुर्गम जानै मान्दैनन् । गए पनि बस्दैनन् । नयाँ डाक्टरका हकमा छात्रवृति करार र लोकसेवा पोष्टिङले उनीहरू बाध्य पार्छ । यस्तो अवस्थामा उनीहरू जे जस्तो हुन्छ, त्यसैमा चित्त बुझाएर सरूवाको प्रतिक्षा गर्छन् । एकडेढ वर्ष विताएपछि विभाग र मन्त्रालय धाउँछन् । पायक पर्ने ठाउँमा सरूवा माग्छन । र, कुनै समय दुर्गम बसेको भन्दै त्यसैको [...]
पब्लिक हेल्थमा आशलाग्दा युवा डा. अमित भण्डारी अधिकांश अभिभावको चाहना हुन्छ– एमविविएस गरेको छोरा नामी विशेषज्ञ बनोस् । राम्रो अस्पतालमा धेरै तलव खाओस् र गरिब बिरामीको सेवा गरोस् । गहन जिम्मेवारीमा रहेका युवा चिकित्सक डा.अमित भण्डारीका बाबुआमा पनि त्यही चाहन्थे तर भइदियो अर्कै । विशेषज्ञता हाँसिल गरेर राम्रो क्लिनिसियन हुने अवसर छोडेर उनले रोजे,पब्लिक हेल्थको बाटो । दैनिक [...]
मलाई यो जिन्दगीले कहाँ पु¥यायो… परिना सुब्बा लिम्बु निर्देशक, दृष्टि नेपाल सम्पन्न परिवारकी जेठी छोरी । कुनै कुरा कमी थिएन । माग्नुमात्रै पथ्र्यो, जे पनि पुरा भइहाल्थ्यो । तर स्वभाविक कुरा, उमेर चढ्दै गएपछि– बाबुआमाको माया मात्र काफी भएन । कक्षा ९ पढ्दै गर्दा एउटा केटासँग नजिकिइन् । हेराहेर, देखभेट र कुराकानीले प्रेममा परिन परिना सुब्बा । उनको अधिकांश समय [...]